HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
NAMIHINA ny zanany lahitokana ilay mpitondratena nahantra. Tsy nino mihitsy izy! Zaza maty no notrotroiny vao teo, nefa velona indray izao ilay zaza. Faly erỳ izy nijery an-janany nitsiky. Hoy ilay vahininy: “Io fa velona ny zanakao.”
Efa ho 3 000 taona no nitrangan’io fitsanganana amin’ny maty tena miavaka io, ary ao amin’ny 1 Mpanjaka toko faha-17 ilay tantara. I Elia mpaminany ilay vahiny. Mpitondratena tao Zarefata ny renin’ilay zaza, ary tsy voatonona anarana. Anisan’ny tena nanatanjaka ny finoany ny nananganana ny zanany. Handinika ny tantarany isika izao, ary hanatsoaka lesona lehibe avy amin’izany.
NAHITA MPITONDRATENA NANAM-PINOANA I ELIA
Nilaza i Jehovah fa hisy hain-tany haharitra ela ao amin’ny faritanin’i Ahaba, mpanjaka israelita ratsy fanahy. Nafenin’i Jehovah mba tsy ho azon’i Ahaba i Elia rehefa avy nilaza fa hisy hain-tany. Nanao fahagagana izy ka nisy goaika nitondra mofo sy hena ho an’i Elia. Hoy koa izy taminy: “Mitsangàna ka mandehana any Zarefata any Sidona, ary mijanòna any. Misy vehivavy mpitondratena efa nasaiko hanome sakafo anao any.”—1 Mpanj. 17:1-9.
Nahita mpitondratena mahantra naka kitay i Elia rehefa tonga tao Zarefata. Io ve ilay vehivavy? Ahoana no hanomezany sakafo ho an’i Elia nefa izy aza mahantra? Nety ho nisalasala i Elia, kanefa niresaka tamin’ilay vehivavy ihany. Hoy izy: “Mba itondray rano kely anaty kaopy re aho hosotroiko e!” Rehefa handeha haka rano ilay vehivavy, dia hoy indray i Elia: “Dia mba itondray mofo kely koa aho, azafady.” (1 Mpanj. 17:10, 11) Tsy nanahirana an’ilay mpitondratena ny hanome rano, fa ny hanome mofo no olana.
Hoy àry ilay vehivavy: “Raha mbola velona koa i Jehovah Andriamanitrao, dia tsy manana mofo aho. Tsy manana afa-tsy lafarinina eran-tanan’ila ao anaty siny lehibe sy menaka kely ao anaty siny kely aho. Maka kitay vitsivitsy aho izao, dia hiditra hikarakara sakafo ho anay mianaka. Dia hihinana izahay, ary ho faty avy eo.” (1 Mpanj. 17:12) Inona no asehon’ireo teniny ireo?
Fantany fa Israelita matahotra an’Andriamanitra i Elia. Hoy mantsy izy: “Raha mbola velona koa i Jehovah Andriamanitrao.” Nahafantapantatra ny Andriamanitry ny Israely angamba izy, nefa tsy nahatonga azy hiantso an’i Jehovah hoe “Andriamanitro” izany. Nipetraka tao Zarefata tany Sidona izy. Teo ambany fahefan’io tanàna fenisianina io angamba i Zarefata. Azo inoana fa mpivavaka tamin’i Bala ny mponina tao. Nahita toetra tena tsara tao amin’io vehivavy io anefa i Jehovah.
Nanam-pinoana ilay mpitondratena, na dia niara-niaina tamin’ny mpanompo sampy aza. Te hanampy azy koa àry i Jehovah rehefa naniraka an’i Elia ho any aminy, fa tsy hoe te hanampy an’i Elia fotsiny. Misy lesona lehibe ianarantsika avy amin’izany.
Marina fa nanompo an’i Bala ny mponin’i Zarefata, kanefa tsy izy rehetra no tena ratsy. Voamarik’i Jehovah ny olona tsara fikasa mbola tsy manompo azy, matoa i Elia nirahiny tany amin’ilay mpitondratena. Marina tokoa fa “amin’ny firenena rehetra, izay olona matahotra [an’Andriamanitra] ka manao ny marina no ankasitrahany.”—Asa. 10:35.
Firy amin’ny olona ao amin’ny faritaninao no toa an’ilay mpitondratena? Manaraka fivavahan-diso angamba ny manodidina azy, fa izy kosa mitady zavatra tsara kokoa. Tsy dia mahalala an’i Jehovah angamba izy ireo, na tsy mahalala azy mihitsy, ka mila ampiana hanaraka ny fivavahana madio. Mitady an’ireny olona ireny ve ianao ary manampy azy?
“ANAOVY MOFO KELY BORIBORY” AHO
Nilaza ilay mpitondratena fa rehefa avy mahandro sakafo indray mihinana ho azy mianaka izy, dia hihinana izany ary ho faty. Diniho anefa ny nasain’i Elia nataony. Hoy i Elia: “Aza matahotra. Midira, ka manaova araka ny teninao. Fa anaovy mofo kely boribory anankiray amin’izay misy ao fotsiny aho aloha, ka ento etỳ amiko. Avy eo, dia afaka mikarakara sakafo ho anareo mianaka ianao. Fa izao no lazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Tsy ho lany ny lafarinina ao anatin’ilay siny lehibe, ary tsy ho ritra ny menaka ao anatin’ilay siny kely, mandra-pahatongan’ny andro handatsahan’i Jehovah oram-be amin’ny tany.’ ”—1 Mpanj. 17:11-14.
Afaka nieritreritra ilay vehivavy hoe: ‘Koa raha tsy inona aho ka hanome anao ny sakafonay farany?’ Tsy nieritreritra an’izany anefa izy. Nino an’i Elia izy ary nankatò azy, na dia tsy nahalala zavatra firy momba an’i Jehovah aza. Tena nitsapa ny finoany izany, nefa tena nety ny nataony.
Nino an’i Jehovah, Andriamanitr’i Elia, ilay mpitondratena ka voaro ny ain’izy sy ny zanany
Tsy nanary an’ilay mpitondratena i Jehovah. Nampitomboiny ny tahirin-tsakafo kely tao aminy, ka nanan-kohanina i Elia sy izy mianaka, mandra-pahatapitr’ilay hain-tany. “Tsy lany ny lafarinina tao anatin’ilay siny lehibe, ary tsy ritra ny menaka tao anatin’ilay siny kely, araka ny tenin’i Jehovah tamin’ny alalan’i Elia.” (1 Mpanj. 17:16; 18:1) Raha tsy nankatò ilay vehivavy, dia nety ho ilay mofo natao tamin’ilay lafarinina sy menaka kely tokoa no sakafony farany. Naneho finoana anefa izy ary natoky an’i Jehovah, ka i Elia aloha no nomeny sakafo.
Hitantsika amin’izany fa tahin’i Jehovah izay maneho finoana. Hanampy anao izy raha maneho finoana ianao rehefa iharam-pitsapana. Hanome izay ilainao izy, hiaro anao, ary ho namanao mba hahafahanao hiatrika an’ilay fitsapana.—Eks. 3:13-15.
Izao no lesona avy amin’io tantara io, araka Ny Tilikambo Fiambenan’i Ziona (anglisy) tamin’ny 1898: “Tokony ho ampy finoana ilay vehivavy ka hankatò, raha te ho mendrika ny fanampian’ny Tompo tamin’ny alalan’ilay Mpaminany. Nety ho nisy mpitondratena hafa mendrika an’izany anefa, raha tsy naneho finoana izy. Toy izany koa fa mitsapa ny finoantsika ny Tompo amin’ny fotoana sasany eo amin’ny fiainantsika. Hahazo fitahiana isika raha maneho finoana. Tsy hotahina kosa isika raha tsy manam-pinoana.”
Mila mitady ny tari-dalan’Andriamanitra ao amin’ny Soratra Masina sy ny boky sy gazety ara-baiboly isika, rehefa miatrika fitsapana. Mila manaraka ny tari-dalany isika avy eo, na dia mety ho sarotra be aza izany. Hotahina isika raha mankatò ny Ohabolana 3:5, 6 hoe: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao. Eritrereto izy amin’izay rehetra ataonao, dia hataony mandeha tsara ny fiainanao.”
‘TONGA HAMONO NY ZANAKO IANAO’
Niatrika fitsapam-pinoana hafa koa ilay mpitondratena taoriana kelin’izay. Hoy ny Baiboly: ‘Narary ny zanak’ilay vehivavy tompon-trano. Tena narary mafy ilay ankizilahy, ka tsy nisy fofonaina intsony tao aminy.’ Nalahelo be ilay reny nidonam-pahoriana ary lasa saina hoe inona no anton’ilay loza. Hoy àry izy tamin’i Elia: “Misy zavatra iombonako aminao angaha moa, ry lehilahin’Andriamanitra ô? Tonga atỳ amiko ianao mba hampahatsiahy ny fahotako sy hamono ny zanako.” (1 Mpanj. 17:17, 18) Inona no tiany holazaina?
Nahatsiaro ny fahotana iray nataony ve izy, ka tsy nandry ny sainy? Nieritreritra ve izy fa sazy avy amin’Andriamanitra ny nahafatesan’ny zanany, ka i Elia no nampita an’izany hafatra izany? Tsy mamaly an’izany ny Baiboly. Tsy niampanga an’Andriamanitra ho nanao ny tsy rariny anefa ilay mpitondratena.
Azo antoka fa taitra be i Elia rehefa maty ilay ankizy. Tena taitra koa izy rehefa nolazain’ilay mpitondratena fa tompon’andraikitra tamin’ilay fahoriana mahavaky fo. Nobatainy nankao amin’ilay efitrano tany an-tampon-trano àry ilay zaza, ary niantso izy hoe: “Ry Jehovah Andriamanitro ô, nahatonga loza tamin’ity mpitondratena ivahiniako ity koa ve ianao ka nahafaty ny zanany?” Niampy ny fijalian’ilay mpitondratena tsara fanahy sy tia mandray vahiny rehefa maty ny zanany. Raha tsy manao zavatra Andriamanitra, dia ho afa-baraka ny anarany, ary izay no tsy tantin’ilay mpaminany. Nitalaho àry i Elia hoe: “Ry Jehovah Andriamanitro ô! Mba ataovy re izay hampiverina ny ain’ity ankizy ity e!”—1 Mpanj. 17:20, 21.
“IO FA VELONA NY ZANAKAO”
Nihaino an’i Elia i Jehovah. Nikarakara an’io mpaminaniny io mantsy ilay mpitondratena ary naneho finoana. Toa navelan’Andriamanitra hihombo ny aretin’ilay zazalahy, satria fantany fa hatsangana amin’ny maty izy, ka hanome fanantenana ho an’ny olona atỳ aoriana. Io no fitsanganana amin’ny maty voalohany resahin’ny Baiboly. Novelomin’i Jehovah indray ilay zaza rehefa nitalaho taminy i Elia. Alao sary an-tsaina ny fifalian’ilay mpitondratena rehefa niteny i Elia hoe: “Io fa velona ny zanakao.” Hoy izy tamin’i Elia: “Tena fantatro tokoa izao fa lehilahin’Andriamanitra ianao, ary marina ny tenin’i Jehovah aloaky ny vavanao.”—1 Mpanj. 17:22-24.
Ireo ihany no lazain’ny 1 Mpanjaka toko faha-17 momba an’ilay mpitondratena. Nety ho lasa mpanompon’i Jehovah tsy nivadika anefa izy, matoa i Jesosy niresaka zavatra tsara momba azy. (Lioka 4:25, 26) Hitantsika amin’ny tantarany fa tahin’i Jehovah ireo manao soa amin’ny mpanompony. (Mat. 25:34-40) Manome izay ilain’ny mpanompony tsy mivadika koa izy, na dia rehefa tena mafy aza ny manjo azy ireo. (Mat. 6:25-34) Hitantsika koa fa maniry hanangana ny maty i Jehovah ary tena mahavita izany. (Asa. 24:15) Tena tokony hahatsiaro an’ilay mpitondratena tao Zarefata àry isika
Hizara Hizara Novalian-tsoa Noho ny Finoany Ilay Mpitondratena tao Zarefata
FANTARO NY TANTARANTSIKA Feno 100 Taona Ilay Sanganasa
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Febroary 2014
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Febroary 2014